दिन काट्ने र काल पर्खनेहरु नेता हुन सक्दैनन् : प्रचण्ड – Pahilo Page
दमक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिन काट्ने र काल पर्खनेहरु नेता हुन नसक्ने बताएका छन् । शनिबार झापाको दमकमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै प्रचण्डले भने, “नेता हुन सरदरबाट माथि उठ्नुपर्छ । घिसेपिटे तरिकाले राजनीति धान्नेहरु नेता हुन सक्दैनन् । कमरेड केपी ओली र मैले त्यो घिसेपिटे तरिका भत्काइदियौं । निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेका छौं, नयाँ तरङ्गसहित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने संकल्प गरेका छौं । हामी नयाँ आवेगसहित आएका छौं । दिन काट्ने र काल पर्खनेहरु नेता हुन सक्दैनन् ।”
“नेताहरुले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले इतिहासमा निकै महत्व राख्दछ । नेताहरुले सही ढङ्गले सोच्दा इतिहास २० र ३० वर्ष अघि जान सक्छ । नेताहरुले गलत सोच्दा राजनीति र इतिहास कैयौं वर्ष पछि धकेलिन्छ”, प्रचण्डले भने, “कमरेड केपी ओली र मैले जोखिम उठाएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने र आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्ने संकल्प गरेका छौं । कमरेड केपीले निरंकुश पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्षको जोखिम उठाउनुभयो । वर्षौं जेल बस्नुभयो । मैले जनयुद्धको जोखिम उठाएँ । नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो । शान्ति प्रक्रियाको जोखिम उठाएँ । नेपालमा ठूलठूला परिवर्तन भए । आज फेरि देशको विकास र समृद्धिका लागि हामीले सकारात्मक रुपले सोच्यौं र एकता सम्भव भयो ।”
“नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरु, तपाईहरुले २५ र ३० वर्ष नेपालमा शासन गर्नुभयो । देशका लागि के गर्नुभयो ?”, यस्तो प्रश्न गर्दै प्रचण्डले थपे, “विकास र समृद्धिको योजना कहाँ पुग्यो ? अब देशको जिम्मा कम्युनिष्टहरुले लिन्छन् । तपाईहरुले हेर्नुस् ।” प्रचण्डले अगाडि थपे, “के नेपाल कांग्रेसको बपौति हो ? कांग्रेसले जित्दा लोकतन्त्र बलियो हुने हामीले जित्दा अधिनायकवाद हुने ? हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमै छौं । हामीले बनाएको संविधानकै दायराभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा गर्दा तपाईहरुलाई टाउको दुखाई किन ?”
“चुनाव रोक्न अनेक षडयन्त्र भए, सकेनन् । अहिले पनि षडयन्त्र भइरहेको छ । तर, अब इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि चुनाव रोकिन्न”, प्रचण्डले भने । शनिबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले बिर्तामोडमा आयोजित स्वास्थ्य महोत्सवको उदघाटनमा सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा होमिन निर्देशन पनि दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति : शनिवार, मंसिर ०२, २०७४ समय : २३:०३:३४ 338 पटक पढिएको